Rindrankajy wiki - Wikipedia
I Ward Cunningham no namorona ny rindrankajy wiki voalohany tamin'ny 1995 ho an’ny fanamboarana sehatra wiki voalohany : ny PortlandPatternRepository.
Ny fahombiazan'io kaonsepta io dia tian’ny olona maro. Nisy sehatra wiki nipotra teo aorian'io. Misy rindrankajy wiki hafa naka, nandika, nanova, nanamora na nanatsara ny zavatra afaka ataon'ny rindrakajy noforonin’i Ward Cunningham.
Tamin'ny 2003, fantatra fa misy rindrankajy wiki mahery ny zato. Ny lisitra feno amin’izao fotoana izao dia milaza fa misy telonjato mahery. Ny zavatra azo ataony sy ny fomba nanaovana azy no mahasamihafa ireo wiki ireo.
Ny rindrankajy voalohany dia natao mba hanao aza tsotsotra ary nihabetsaka hatrany ny asa afaka ataony. Nitranga tsikelikely ny rindrankajy tsara endrika sady mora ampiasaina.
Ny wiki voalohany
Fampitahana rindrankajy wiki
Fampitahana rindrankajy wiki (Lahatsoratra, Novambra 2004)
Fampitahana ny wikifarms any amin'ny Wikiversite anglisy Archived Febroary 18, 2010 at the Wayback Machine
Ahoana no misafidy wiki Cunningham & Cunningham, Inc
Lisitra ny rindrankajy wiki Cunningham & Cunningham, Inc
Fitaovana tsy andoavam-bola mba hanandrana ny fiarovana eo amina wiki auto-hebergé tsotra Archived Febroary 7, 2010 at the Wayback Machine — Meta
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rindrankajy_wiki&oldid=1036736"
Voaova farany tamin'ny 29 Aogositra 2021 amin'ny 07:20 ity pejy ity.